umphimbo obuhlungu kwenzeka ngokumelene ingemuva yokungenwa yizifo ngokucindezela amagciwane athile kanye nesikhunta. Ukuze sibhekane ukungakhululeki kanye nomthelela ukuvuvukala kuzosiza nemfica. kusebenta Kuqinisekisiwe onezinto "Strepsils Fundzisisa". Yokusetshenziswa imibiko mayelana izingxenye ezakha izidakamizwa futhi unikeze nomphumela oqabulayo.
incazelo Jikelele ekulungisweni
Throat lozenges athandwa kakhulu futhi asetshenziswa okudambisa ubuhlungu, futhi akuthanjiswanga we ulwelwesi lwamafinyila we ngalo ingaphakathi ngomlomo, ukuze lula ukugwinya. Imakethe ezithaka imithi inikeza uhlu olubanzi imikhiqizo kulesi sigaba. Sikuveze isinyathelo isinqandakuvunda babe candy "Strepsils Fundzisisa". Yokusetshenziswa izimvume ukuzisebenzisa njengendlela yokuthola ukwelashwa lingaze.
Kusho ngokwanele ngempumelelo futhi ingasetshenziswa njengendlela monotherapy umalaleveva noma ukwelashwa kuhlangene ezindabeni ezimbi kakhulu. Kufanele kukhunjulwe ukuthi nemfica Kunconywa ukusebenzisa kuphela esigabeni sokuqala inkambo isifo. "Strepsils Fundzisisa" ikhiqizwa ne ukwengeza izingxenye zemvelo - neliju lemon, okuyinto nomphumela ezengeziwe zokwelapha, ukukhuthaza ekululameni ekuseni. Ngokungafani candies elula, okuyinto imakethwa ngaphansi kwegama lomkhiqizo "Valium", ukuze ubhekane ngokuphumelelayo nalesi kakhulu nobuhlungu obukhulu emphinjeni wakhe ukuyisiza "Strepsils Fundzisisa".
Imithi isinyathelo lozenges ukunikeza izinto eziqukethwe nokulungiselela. isithako izenzo flurbiprofen njengeqembu zendawo izidakamizwa ezingekho steroidal anti-inflammatory. I candies yalolu ketshezi equkethwe esincane okungahambisani kubathinta nomthelela ohlelweni jikelele, kodwa usebenza endaweni kuphela. umthelela Local kuyenza isheshe ukuzizwa ngempumuzo izimpawu. Uma eqhathaniswa analgesics letindzala, izidakamizwa wendawo yakhiwa umthamo ezincane isithako esebenzayo.
Ingakapheli imizuzu engu-15 ngemva kokuphathwa isiguli uzizwa ngcono okukhulu. umphimbo obuhlungu cishe ngokuphelele nemfica okhrophiwe "Strepsils Fundzisisa". Intengo zomuthi siphakeme ngokwanele, uma kuqhathaniswa nabangu imithi efanayo. Okufakiwe "Strepsils Fundzisisa" (24 candy ku amabhamuza ezimbili) e isiguli abiza ruble 350-400.
Lozenges Kunconywa ukusebenzisa for ekwelapheni siyefana ubuhlungu womphimbo nomlomo. Okudingekayo ukuze ukuvela ubuhlungu kungaba kokubili omsakazo ezithathelwanayo kanye virus. Ngokuvamile uphawu kuyinto umkhuhlane, SARS, namathansela, laryngitis.
Qaphela ukuthi umenzi alikukhuthazi self-medicate, futhi kufanele uqale uvakashele udokotela ukuze kutholakale imbangela yokushona emizweni ezingemnandi emphinjeni kweqiniso. Lozenges ingasetshenziswa njengengxenye yokwelashwa okudidiyelwe ubuhlungu.
Ngingaba zisebenze izingane?
"Strepsils Fundzisisa 'kubhekisela esenzakalweni esiyisimangaliso izidakamizwa ezingekho steroidal anti-inflammatory yesenzo sendawo futhi Pediatrics kusetshenziswe ngokuqapha. Lemon-uju candy, ngokuvumelana neziyalezo olusemthethweni, umenzi ivumela ukusetshenziswa ekwelapheni izingane waphenduka engu-12 ubudala.
iziguli kwabadala kanye nezingane engaphezu kwengu-12 ibonisa zisebenzisa 1 ithebhulethi ngenxa yobuhlungu emphinjeni. Phakathi ukudla imithi kufanele ukumelana isikhawu - okungenani amahora angu-3. Akufanele idlule umthamo Kunconywa nsuku zonke futhi ukusebenzisa ngaphezu 5 lozenges "Strepsils Fundzisisa". Umuthi kunikeza umphumela isinqandakuvunda futhi ngokushesha aqede ubuhlungu nobuhlungu emphinjeni.
Izibhebhe kufanele aphelise kuze nokonakala ephelele. Kunconywa ukuthi ngezikhathi ezithile ukuhambisa lollipop ngoba ngalo ingaphakathi ngomlomo ukuvimbela ukucasuka futhi kwadala umonakalo ebucayi nolwelwesi lwamafinyila. Kufanele kukhunjulwe ukuthi ithebhulethi engcono ezithathwe emva kokudla. Umuthi akufanele kuthathwe izinsuku ezingaphezu kwezingu-3 (mhlawumbe kubangele emibi).
Iziguli umlando sikashukela, qaphela ukuthi uswidi "Strepsils Fundzisisa" iqukethe glucose. Ngo "Strepsils Lemon" ingasetshenziswa njengenhlangano Analogue ekwelapheni. Njengengxenye yalezi amaphilisi akukho ushukela.
Okumele kuqashelwe izidakamizwa ebekiwe iziguli umfutho wegazi ophakeme, esingamahlalakhona senhliziyo ebuthaka, isibindi nezinso egunjini lokuhlolwa kwezifo. Uma, ngesikhatsi ukwelashwa, isiguli athuthukile imfiva, sawohloka isimo jikelele, kufanele uxhumane nodokotela wakho.
Ngo kuqokwa izidakamizwa "Strepsils Fundzisisa" Uchwepheshe kufanele inake ukuxhumana yayo nezinye izidakamizwa. Nemfica ayikwazi ukusetshenziswa kanyekanye ngemithi kusukela iqembu non-steroidal izidakamizwa eqeda ukuvuvukala. Izingxenye lichaza ekwakheni amaphilisi, ukunciphisa umphumela oqabulayo isisu, imithi abanomfutho wegazi ophakeme. Ngesikhathi esifanayo, kufanele kuqashelwe ukuthi izidakamizwa sithuthukisa umphumela anticoagulants (ingadala ukopha).
I Izimo eziyinhloko ukusetshenziswa lozenges ngoba umphimbo obuhlungu - Hypersensitivity kuya izingxenye ekwakhiweni. Njengezinye izidakamizwa ezingekho steroidal anti-inflammatory, "Strepsils Fundzisisa" imfundo on isicelo sivimbela ukusetshenziswa e pathologies yokusetshenziswa pheshana emathunjini ezisebusweni esigabeni oyingozi. Izimo futhi zihlanganisa:
umlando somoya bronchial.
Iziguli uqaphele ukuthi uma usebenzisa izidakamizwa "Strepsils Fundzisisa" ngokuvamile ushintsho zesikhashana ukunambitheka efihlekile, futhi ukucasuka endaweni contact amaphilisi kanye evele mucosal. Ngezinye izikhathi kukhona umuzwa ukuluma kancane, ukuluma. izimpawu ezifanayo sishesha ngokwanele futhi akuyona imbangela ukuqedwa ukwelashwa.
Umuthi kungabangela exacerbation of peptic isilonda isifo, ukubukeka ubuhlungu epigastric, isicanucanu, ukuhlanza. Nakuba ukuthatha candy kusukela umphimbo obuhlungu ngezinye izikhathi ithuthukisa yikhanda ataxia. Ezimweni ezingavamile, umuthi kuthinta esimiso senhliziyo nemithambo yegazi (anaemia, thrombocytopenia, leukopenia).
UMenzi candies futhi wanakekela iziguli kancane abaphethwe ubuhlungu emphinjeni e pathologies ezihlukahlukene ezithathelwanayo. "Strepsils" izingane avunyelwe ukusebenzisa for ekwelapheni izingane ezineminyaka engu-6. Nemfica ayatholakala ulamula noma sitrobheli flavour futhi lingabe ushukela ekwakhiweni. The main izidakamizwa esebenzayo - 2,4-dichlorobenzyl utshwala amylmetacresol.
Ngokusho isichasiselo, umuthi isetshenziswa ukwelapha izinqubo ukuvuvukala futhi ezithathelwanayo ngo ngalo ingaphakathi ngomlomo kanye pharynx (SARS, pharyngitis, laryngitis, stomatitis, namathansela). Ukuze yezingxenye asebenzayo amagciwane engazweli ebucayi igremu-HIV futhi igremu-HIV.
Lozenge "Strepsils" imvume yokusebenzisa njalo emahoreni 2-3 (hhayi ningi than 8 lozenges ngelanga). Hypersensitivity ukuze izithako nokuluthwa yizidakamizwa akufanele zaphathwa ukusabela nomzimba. Umenzi uncoma kakhulu ukusetshenziswa lozenges ekwelapheni izingane ezineminyaka engaphansi kwengu-6.
Ngingakujabulela yini "Strepsils" phakathi nenkathi yokukhulelwa?
Ngesikhathi kwenziwa ingane izidakamizwa lokuzikhethela ukuze bayothola ukwelashwa kufanele wasondela ngokucophelela okukhulu. Ukuze uthathe imithi yabo ngenxa yobuhlungu emphinjeni is hhayi Kunconywa. Phakathi nenkathi yokukhulelwa "Strepsils Fundzisisa" Umsebenzisi Isicelo unqabela linqume ekwelapheni izinqubo ukuvuvukala futhi ezithathelwanayo emphinjeni, ingaphakathi buccal. Udokotela ukuba khona kumele akhethe imithi ephephile ukuthi ngeke kuthinte Yiqiniso yokukhulelwa.
"Strepsils Fundzisisa": analogs namanani
Ngesisekelo ezifana tablet etholakalayo flurbiprofen for ekwelapheni izinhlungu emphinjeni, njengokuthi "Strepfen", "Flurbiprofen", "Flugalin". Khetha i-analog ngaphandle iseluleko onguchwepheshe kuyinto engathandeki kakhulu.
A-analog isakhi izidakamizwa "Valium" iyindlela okudambisa ubuhlungu emphinjeni "Adzhisept". Obambele ine anti-inflammatory, isinqandakuvunda futhi izinzwa umphumela wendawo. Ngokusho imiyalelo, umuthi ingasetshenziswa aphathe izingane abaneminyaka engama 6.
I izinkomba ukusetshenziswa yilezi:
"Adzhisept" ngokuvamile iqondiswa iziguli ezikhungweni "Strepsils Fundzisisa" njengoba analog. Intengo izidakamizwa iyatholakala iningi iziguli futhi ruble mayelana 105-120. iphakethe ngasinye (amaphilisi 24).
Miselela izidakamizwa "Strepsils 'lingasebenza nangomqondo ngokusebenzisa izinto ezinjengenkolo" Geksoral "," Vokasept "," Rinzai Lorsept "," Suprema uLaure ".
"Detraleks": side effects kanye Izimo
Badger amafutha: izinzuzo efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka izakhiwo izinto eziwusizo, njengokuthi ukwamukela, ukubuyekezwa
"Mirapex": yokusetshenziswa, incazelo, ukubuyekezwa
Homeland Igumbi Fern. Okunhlobonhlobo Fern zasendlini